Jamciyadda Al-Ixsaan oo Raashiin ka qeybisay Gobolka Galgaduud. (Sawirro) – Shabakadda Wararka Amiirnuur
Jamciyadda Al-Ixsaan oo Raashiin ka qeybisay Gobolka Galgaduud. (Sawirro)
January 30, 2017 11:53 am by admin Views:
Jamciyadda Al-ixsaan Al-kheyriyah oo ah Jamciyad ku caan baxday samafalka ayaa maalimhii lasoo dhaafay waxey raashiin qeybin ballaaran ka waday degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobalka Galgaduud ee bartamaha dalka Somaliya.
Goobaha sida gaarka ah Jamciyada Raashiinka kaga qeybisay waxaa ka mid ah degmooyinka Galhareeri iyo Galcad oo ka wada tirsan gobalka Galgaduud raashiinkaasi oo ay u qeybisay dad masaakiin ah oo ku dhaqan labadaasi degmo.
Waaliga Wilaayada Islaamiga ah Galgaduud Sheekh Xasan Yacquub Cali oo ka hadlay goobta raashiinka laga qeybinayay ayaa uga mahadceliyay Jamciyada Al-ixsaan Al-kheyriyah howlaha raashiin qeybinta ah ee ay ka sameysay gobalka Galgaduud.
Sidoo kale dadkii masaakiinta ahaa ee raashiinkaasi loo qeybiyay ayaa xusay in raashiinka la siiyay xilli ay abaaro ba’an jirta baahi weyna ay u qabeen raashiinka la siiyay oo ka kooban Bur’Bariis’Sokor’Saliid iyo Timir.
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Waaliga Galgaduud.
Halkan Ka Dhageyso Dadka Raashiinka Loo Qeybiyay.
Halkan Ka Daawo Sawirada Raashiinka Iyo Dadka La Siiyya.